China Akpaaka Jumbo Akpa nhicha igwe ikuku Washer FIBC Cleaner ESP-B ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | VYT
Akpa akpa FIBC, nke a makwaara dị ka akpa akpa na-agbanwe agbanwe, akpa akpa, akpa oghere, wdg, bụ ụdị akụrụngwa akụrụngwa. Na kreenu ma ọ bụ forklift, ọ nwere ike ịmata njem ụgbọ mmiri. O adabara maka ibuga nnukwu nnukwu ntụ ntụ na ihe granular. Akpa akpa bu udi ihe eji ebu ihe ndi mmadu na-ebughari, nke a na-eji ya na njem na ngwugwu nke uzuzu, ihe ndi ozo na ihe ndi ozo dika nri, ọka, ogwu, ulo oru ogwu, ihe ndi ozo, wdg. Ejiri akpa polypropylene dị ka isi akụrụngwa, na-agbakwụnye obere ego nke sizinin anụ, na-agwakọta, na-agbaze ma na-amịpụta ihe nkiri plastik site na onye na-ebubata ya, na-egbutu n'ime silk, wee gbatịa, na-eme nnukwu ike na obere elongation PP raw silk site na ntọala okpomọkụ, wee na-eme ka isi ákwà nke plastic kpara ákwà site spinning na mkpuchi, na ịkwa akwa ya èbè na ndị ọzọ ngwa na-eme ka akpa akpa.
N'ozuzu, a na-etinye calcium carbonate na akwa maka akara pụrụ iche nke akpa akpa. Ebe ọ bụ na akwa akwa ahụ dị oke oke, ọdịnaya nke calcium carbonate kwa otu mpaghara dị elu. Ọ bụrụ na ogo nke calcium carbonate agbakwunyere adịghị mma, a ga-enwe oke ájá, nke ga-emetụta ike ịgbapụ mkpuchi. N'otu oge ahụ, a ga - enwe eriri eri, ahịrị na irighiri ihe ndị ọzọ na akpa akpa. N'ebe ụfọdụ teknụzụ dị mkpa ka ehichaa ya n'ime akpa akpa, ọ dị mkpa iji kpochapụ ájá na ahịrị n'ime akpa akpa.
Ịnye ọkụ 380V-3phase-50HZ
Usoro echekwara Ala
Fan igba 7000m³-9000m³
Fan ọsọ 1450ghachị
Mmetụta iwepụ ọnọdụ ihe dịka 800V
Isi nsogbu Ihe dị ka
Nrụgide Ọrụ ihe 5 / 6bar
Noise na-arụ ọrụ 60PB
oge awa ọrụ Oge dị ọcha dịgasị dabere na nhazigharị olu akpa
nha ịbụ ihe dị ka 300kg
olu 2 × 1.2M
Agba Bulu, odo
Ihe eji eme ihe bara uru bu ihe eji eme ya, isi ihe di iche iche nke edoziri na isi nke isi, ihe nkpuchi ikuku nke edoziri na isi ozo nke isi, usoro nhazi maka idozi akpa akpa na isi, na ihe mkpochapu electrostatic maka iwepu static ọkụ eletrik na akpa ahụ.
N'oge igbutu na ịkwa akwa ọrụ achọrọ iji rụpụta ihe ndị FIBC, a na-ebo akwa ahụ ebubo electrostatically. Ebubo ndị a na akwa a na - emechi mgbe niile nke obere yarn na akwa yana nnabata nke residues nke thermal mbepụ. A na-ahụkarị ụmụ ahụhụ, ntutu mmadụ na nke ndị ọrụ ndị mmadụ n'otu n'otu n'ihe ndị arụpụtara FIBC ọhụrụ.
Nke gara aga: LoopCUT webbing FIBC / nnukwu akpa ọnwụ igwe FIBC-4/6
Osote: Hydraulic Vetikal / kaadiboodu / Plastic Press Waste Akwụkwọ Baler
Fibc akpa nhicha Machine
Jumbo akpa ikuku Washer
Jumbo akpa Clean Machine